UFOLGALERIE JARDINFOU GÎTEDODO ... (CITQ: no.096876) - I-Airbnb
UFOLGALERIE JARDINFOU GÎTEDODO ... (CITQ: no.096876)
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguDaniel
Indlu epinki enolwakhiwo oluthile, ejongene noMlambo iSaint Lawrence, kwilali encinci enomtsalane ... iSaint-Roch des Aulnaies.
Inxalenye esempuma, ... (indlela yokungena ebomvu yendlela) ... ihlaliswa ngabaqeshi kwaye enye indawo yendlu isebenza njengendawo yobugcisa kunye nendawo yokuhlala yomnini. Idome ikwafanelekile ukutyelelwa kwaye ikwasebenza njengendawo yokuhlala yomniniyo kunye negumbi lokuzoba elinokutyelelwa.
Uhlala kwisitudiyo esineenyawo ezingama-24 ububanzi ngama-30 ubude namagumbi amabini okulala, ikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala. Ifulethi lihonjiswe ngemizobo, iikholaji, iitafile, izitulo, izixhobo zokukhanya, iidesika kunye neebhedi, zonke zenziwe ngumnini. Uya kuhlala endlwini yomzobi. Ibhedi kunye nelinen zinikezelwe ngokupheleleyo. Uzisa uvuyo kuphela ...! mbut neentsizi zakho!
4.95 out of 5 stars from 551 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-551
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi551
Ukufuphi noMlambo yaye ukutshona kwelanga kuyatshisa. Ngentwasahlobo ujikeleza izigidi zeblue forget-me-nots, dandelions, ladies 'juliennes. Ngawo onke amaxesha, kulo mmandla obizwa ngokuba yi-CHAUDIERE-APPALACHE, uya kutyelela iimyuziyam ezininzi, iigalari okanye iivenkile, ogle * amangcwaba phantsi kweCawa *, uya kuthenga isonka sakho kunye ne-croissants kwi-1 km kunye nesiqingatha, tyelela iLa Seigneurie des Aulnaies, ndwendwela iMyuziyam yeMemori ePhila, yiya kwiiNgoma zoLwandle, qhuba iithiyetha zasehlotyeni kunye neminyhadala eyaziwayo, uthathe inxaxheba kuMnyhadala weAccordion. Kukho iikhosi zegalufa ezimbini ezikufutshane, amaziko amane okukhenketha e-ski, ii-spas, indawo yokuthenga. njl. Indlela yomjikelezo idlula phambi kwendlu ... njl.
Iindwendwe zinokulandela iindibano zocweyo zokuyila zasimahla kunye nomnini. (iindleko ezongezelelweyo). Uninzi lwabantu luza kuphumla, ukuphumla, ukutyelela ingingqi yaseSaint-Jean Port Joli kunye neKamouraska, ukubhala, ukuhleka, ukucula, ukuqamba okanye ungenzi nto. On isicelo, ukuba kukho abantu abaninzi kakhulu, unokuba i esigeza phezu ukuwasa kophahla, kufuphi mlilo sicamngca umlambo kunye iintaba okude Charlevoix, kodwa kukho wehla Terrace elikhulu, banye.
Iindwendwe zinokulandela iindibano zocweyo zokuyila zasimahla kunye nomnini. (iindleko ezongezelelweyo). Uninzi lwabantu luza kuphumla, ukuphumla, ukutyelela ingingqi yaseSaint-Jea…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Roch-des-Aulnaies